Wararka - Habka rakibaadda ee furitaanka albaabka - kaligaa ku dheji nuugista albaabka
SHAQEYNTA BILAASH AH EE DHAMMAAN SOO SAARKA BASKAALKA
Taxanaha iridda Albaabka
Taxanaha Albaabbada Yurub
Taxanaha Iibinta Iridda Cad ee Ivoor
Booska Taxanaha Aluminium ee Tayada Aluminiumka ah
Taxanaha ahama Steel Door Stopper
Taxanaha Zinc Alloy Door Guard
Taxanaha Zinc Daawaha Alloy
Zinc Daawaha Albaabka Joojiya Taxanaha
Zinc Daawaha Alloy Floor Albaabka Taxanaha
Taxanaha Hook Shiinaha Style
Taxanaha Hook Yurub
Habka rakibaadda ee furitaanka albaabka - kaligaa ku dheji nuugista albaabka
Waa dhaqan aad u caam ah in la rakibo a Albaabka Daawaha Zinc Jooji albaabka gadaashiisa. Jilitaanka albaabka yar, ma jirto door yar, waxay kaga fogaan kartaa albaabka waxyeello aan loo baahnayn, adeegsiga isla waqtigaas ayaa aad ugu habboon
Habka rakibaadda ee Albaabka Daawaha Zinc Jooji nuugista ayaa go'aamisa naqshadeynta
Ugu horreyntii, si loo xaqiijiyo rakibaadda furitaanka albaabka, waxaa lagu rakibay dhulka, ama waxaa lagu dhejiyay derbiga. Sidoo kale xaqiiji meesha gaarka ah ee rakibidda, cabbirka, iyo tirada Meelaha looga tagayo albaabka waa inay u hoggaansamaan rabitaanka. U fur albaabka meesha ugu sareysa ee loo baahan yahay, tijaabi saameynta nuugista albaabka waa macquul, albaabka irridda masaafada albaabku waxay ku habboon tahay in la helo booska albaabkiisa, si qallafsan ayaa loo dhigaa ka dib marka albaabku fiicanyahay, fur albaabka, isku day hawlgalka dhabta ah waa macquul, oo ay ku jiraan nuugista albaabku waxay ku jirtaa waxyar, ama wax yar, xagasha gaarka ah ee irridda albaabka.
Ugu dambeyntii go'aaminta booska, ku dheji dusha sare ee dusha sare, marka hore hel booska joogsiga ee albaabka oo leh qalin qalinka sagxadaha dhulka si aad u xaqiijiso booska albaabka, ku xariiq xariiq dhulka leh qalin, marka hore xaqiiji booska ugu dambeeya albaabka oo furan, talaabada xigta ee lagu xaqiijinayo booska ugu dambeeya ee rakibida irridda albaabka.
Habka rakibaadda loogu talagalay Albaabka Daawaha Zinc Jooji nuugista bilowga rakibaadda
Shaqada xigta, waa in lagu ciyaaro layliga korantada, ee ku saabsan godka albaabka soo saarida albaabka. Ka dib rakib dhammaadka go'an ee is biirsashada albaabka, adkee furitaanka kor ku xusan, furitaanka albaabka wuxuu u qaybsan yahay dhammaad go'an iyo albaabka dhammaadkiisa, dhammaadka go'an wuxuu u baahan yahay inuu adkeeyo boolal ka hor inta aan la rakibin, ka dibna leh lifaaqa gudaha ee ku xiran kabadh ayaa lagu hagaajin doonaa dhulka ama darbiga. Waa shaqo fiican in lagu maroojiyo muraayadaha meertada yar ee gudaha. Khibrad ma samayn karto. Kadib xaqiijinta booska, feer iyo isku soo uruurinta, shaqada xigta waa in lagu rakibo dhamaadka hagaajinta dhulka.
Ku adkee boogaha kor ku xusan dhammaadka hagaajinta iyada oo ay ku jiraan qalabka koone ee gudaha iyo isweydaarsiga albaabka si toos ah ayaa loo rakibi doonaa. Qalabka albaabku wuxuu ku dhammaadaa albaabka illaa iyo inta xarigga la adkeyn karo, albaabka nuugista nalka iftiinka rakibidda dhammaadka go'an weli waa mid aan faa'iido lahayn, sidoo kale wuxuu rabaa albaabka in la rakibo, furaha ama meelaynta dhamaadka albaabka, qaabku waa in marka hore albaabka laga furo kan ugu weyn, ka dibna la helo booska saxda ah ee albaabka, lagu adkeeyo albaabka albaabkiisa dhamaadka faashad.
Habka rakibaadda ee Albaabka Daawaha Zinc Jooji nuugista kama dambaysta ah ee nuugista
Fiiri hagaajinta Xagasha dhamaadka go'an ee shiditaanka albaabka ka dibna gebi ahaanba adkee. Tallaabada ugu dambeysa ee rakibidda furaha albaabka waa hagaagis fiican. Xagasha soo nuugida albaabka wareega waxaa si buuxda loogu dhejiyay dhamaadka albaabka iyo irridda albaabka.
Waqtiga boostada: Juun-16-2021